Pharma အဆင့် (USP) ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် China L-Threonine CAS 72-19-5 | ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
CAS အမှတ် .: ၇၂-၁၉-၅
အစာအာဟာရဖြည့်စွက်အနေဖြင့် L-threonine (Abbreviated Thr) ကိုအများအားဖြင့် ၀ က်ခြံနှင့်ကြက်မွေးမြူရေးအတွက်အစာတွင်ထည့်သွင်းသည်။ ၎င်းသည်ဝက်အစာတွင်ဒုတိယကန့်သတ်သောအမိုင်နိုအက်စစ်နှင့်ကြက်မွေးမြူရေးအစားအစာတွင်တတိယကန့်သတ်ချက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။
2. အစာအာဟာရဖြည့်စွက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့် ၀ က်ခြံနှင့်ကြက်အစာအတွက်အစာထည့်သည်။ ၎င်းသည်ဝက်အစာတွင်ဒုတိယကန့်သတ်သောအမိုင်နိုအက်စစ်နှင့်ကြက်မွေးမြူရေးအစားအစာတွင်တတိယကန့်သတ်ချက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။
၃။ အာဟာရဖြည့်စွက်အစာအဖြစ်ပေါင်းစပ်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်သွေးသွင်းခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်သည်။
4. peptic အစာအိမ်နာ၏ adjuvant ကုထုံးအတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်လည်းသွေးအားနည်းရောဂါ, angina, aortitis, နှလုံးမလုံလောက်ခြင်းနှင့်အခြားနှလုံးသွေးကြောစနစ်၏အခြားရောဂါများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
L-Threonine ကိုဂလူးကို့စ် (glucose) ဖြင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအဖြစ် microbial fermentation ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးအမြှေးပါးစစ်ထုတ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု, crystallization, ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အခြားဖြစ်စဉ်များပြီးနောက်သန့်စင်ပေးသည်။ ပိုးမွှားများအားကစော်ဖောက်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ L-threonine သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိဘဲဘေးကင်းလုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာအသုံးပြုရန် (ပို့ကုန်ကို ဦး တည်သောလယ်ယာလုပ်ငန်းများအပါအ ၀ င်) အစာအမျိုးမျိုးတွင်ရနိုင်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်အနေဖြင့် L-Threonine သည်အစာထည့်သွင်းခြင်း၊
L-threonine သည် feed feed တစ်ခုအနေဖြင့်အစာအရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်နှင့်အစာထုတ်လုပ်သူများအတွက်အစာကျွေးရန်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ L-Threonine ကိုယေဘုယျအားဖြင့် lysine နှင့် တွဲဖက်၍ ၀ က်ခြံအစာကျွေးခြင်း၊ ဝက်အစာကျွေးခြင်း၊ ကြက်အစာကျွေးခြင်း၊ အသားအရည်အသွေးတိုးတက်လာခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်း၊ အသားရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခြင်း၊ အစာပြောင်းလဲခြင်းအချိုးလျော့နည်းစေခြင်း၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်အစာကြေလွယ်မှုနည်းသောအစာအာဟာရတန်ဖိုးများကိုပိုမိုအားကောင်းစေခြင်း၊ ပရိုတိန်းအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြီးအစာတွင်ထည့်သွင်းရမည့်ပရိုတင်းများကိုလျှော့ချခြင်း၊ မွေးမြူရေးမြေ, ဇာ၊ ဆီးနှင့်အမိုးနီးယားအာရုံစူးစိုက်မှုမှထုတ်လွှတ်သောနိုက်ထရိုဂျင်လျော့နည်းစေခြင်း၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်မွေးမြူရေးခြံများတွင်ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းများမှတစ်ဆင့်အစာကျွေးခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ရောဂါခုခံတွန်းလှန်ရန်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်။
PH တန်ဖိုး 5.0 ~ 6.5
အကြီးစားသတ္တုများ (PB ကဲ့သို့) .000.0015%
ကလိုရင်း (Cl ကဲ့သို့) .050.05%
(SO ကဲ့သို့) ဆာလဖိတ်4) .030.03%
တိကျသောလည်ပတ်မှု -26,7 ° ~ -29,1 °
ရှေ့သို့ Pharma အဆင့် (USP) အတွက် L-Methionine CAS 63-68-3
နောက်တစ်ခု: Pharma အဆင့်အတွက် L-Isoleucine CAS 73-32-5 (USP / EP)
L-Threonine အစားအစာအဆင့်, Phade အဆင့် L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Valine 72-18-4, L-Threonine ဆေးဝါးအဆင့်, တိရိစ္ဆာန်အာဟာရ,